Kuhlehliselwe uLwesine ukuvulwa kwezikole - Ilanga News
Home Izindaba Kuhlehliselwe uLwesine ukuvulwa kwezikole
Kuhlehliselwe uLwesine ukuvulwa kwezikole
UMshengu usola othishanhloko “ngokuvimba” othisha ezikoleni
uMnu Kwazi Mshengu onguNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uthi kuliphutha okwenziwa ngothishanhloko bezikole okuthiwa bahlohla othisha ukuba bangalubhadi ezikoleni.
UNUKA othishanhloko ngokuvimba othisha ukuba babuyele emsebenzini uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu, (osesithombeni) othi othishomkhulu kabanalo lelo lungelo.
UMnu Mshengu usho lokhu izolo esigcawini sabezindaba eMayville, eThekwini ngesikhathi uhulumeni wesifundazwe uyobikela izakhamizi ngokuqhubekayo njengoba izwe livaliwe ngenxa yesifoiCovid-19.
Ukhuluma kanjena nje, kubukeka ukuvulwa kwezikole kuhlehlisa okomuntu osindwa wumthwalo otshekele ngemuva, njengoba kulesi sigcawu sayizolo, uNdunankulu wa-KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, ememezele ukuthi sezizovulwa ngoLwesine.
Othisha bekufanele bavule namhlanje bese kulandela abafundi bakaGrade 7 nabakaGrade 12 mhla lulunye kuNhlangulana (June).
UMnu Mshengu uthi sebezwile ukuthi abanye othishanhloko bakhiphe umyalelo wokuba othisha bangalubhadi emsebenzini, baphinde bavale namasango ezikoleni, okuzogcina kuphazamiseka ukulethwa kwezinto zezokuphepha okumele zihanjiswe ezikoleni ukulwa ne-coronavirus.
“Othishanhloko bangabaphathi kwezemfundo, futhi zonke izinqumo sizithatha nabo, ngakho-ke kabanalo ilungelo lokukhipha umyalelo wokuthi othisha mabangabuyeli esikoleni,” kusho uMnu Mshengu.
UMnu Zikalala uthe kusetshenzwe kanzima ngokubambisana nomnyango ukuze kuqinisekiswe ezokuphepha ezikoleni.
Uthe ukuhlehliswa kokubuyela kothisha emsebenzini namhlanje, kudalwe wukuthi uhulumeni ufuna bafike emsebenzini konke sekulungile.
“Sithe masihlehlise usuku lwangoMsombuluko ukuze nathi sizenelise kahle ngokuthi zonke izikole zihlanzekile, afakiwe amanzi, ama-sanitizer nezimfoyo nakho kukhona.
“Kasikwazi ukuyeka unyaka ufe ngoba lokho kusho ukufa kwekusasa labantwana, kumele livikelwe babuyele ezikoleni,” kusho uMnu Zikalala.
Uthe ngoLwesine kulindeleke ukuba othisha baKwaZulu-Natal abangaphezu kuka-49 000 babe semsebenzini, umatikuletsheni olinganiselwa ku-147 000, uGrade 7 obalelwa ku-357 000.
Izimfanelo zokuqinisekisa ukuphepha uthe sezisatshalalisiwe emahhovisi ezemfundo ezifundeni, sekulindeleke ukuba ziye ezikoleni.
“Othisha bazofika konke sekuqondile ngoLwesine, ngakho-ke othishanhloko bona babuyela ngoMsombuluko (namhlanje) emsebenzini ukuze bezokwamukela izimfanelo ezidingekayo ezikoleni,” kusho uMnu Zikalala.
Uveze nokuthi kuzona zonke izikole ezilinganiselwa ku-6 000 kulesi sifundazwe, akekho umfundi ozongena esangweni engahloliwe. Isikole sizohlanzwa kabili ngosuku, ekuseni nantambama.
Utshele abezindaba ukuthi abafundi kabavumelekile ukutshelekana noma ngani, uma behleli, kumele bashiye isikhala esiwu-1.5m phakathi kwabo, kanti amathangi amanzi awu-45 000 nawo asatshalalisiwe ezikoleni.
“Kuzoqinisekiswa ezokuphepha nasohlelweni lwezithuthi zabafundi kanjalo nasohlelweni abazodla ngalo,” kusho uMnu Zikalala.
Izinyunyana zothisha, iSadtu neNatu, zikhiphe umyalelo kumalungu azo zathi azozwa ngazo uma isimo sesikulungele ukuba abuyele emsebenzini.
UMengameli weNatu, uMnu Allen Thompson, uthe izimfanelo ezisafikile kwezinye izikole kazeneli ngisho othi-sha, ingasakhulunywa-ke eyabafundi.
UNkz Nomarashiya Caluza, ongunobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uthe othishanhloko namasekethe, akusiwona umsebenzi wabo ukulanda lezi zinsiza emahhovisi omnyango, akumele bazihluphe ngokwenza lokho.
Previous articleUkhuthaza abesifazane ukuba banganciki kubantu besilisa
Next article“Sibi isimo kuMenzi Ngubane”